Soosaarayaasha iyo Shirkadaha Warshadaha Gelatin - Shiinaha Warshadaha Gelatin Warshadaha
Gelatin warshadaha waa borotiin laga soosaaray qaybta kolajka ee isku xidhka ama unugyada unugyada xayawaanka. Waa kiimiko ganaax ah iyo nooc ka mid ah wax soo saarka gelatin loo qaybiyay iyadoo loo eegayo isticmaalka kala duwan ee gelatin.
Warshadaha Gelatin ee ciyaarta warshadaha waxsoosaarka waxay badanaa ka faa'iideystaan ​​sameynta daloolada iyadoo ay kafeyso xumbada kolloowga, oo ay weheliso oksijiyeer, wakiilka dabka iyo buuxinta, si looga dhigo mid isla markiiba shidma
Gelatin-warshadeed oo loogu talagalay xabagta jelly waa nooc ka mid ah gelatin loo isticmaali karo ka mid ahaan in lagu sameeyo xabagta xabagta. Jelly Glue waa nooc cusub oo koollo dhalaalid kulul oo deegaanka u roon. Waxaa laga soosaaray maaddada dabiiciga ah waxyaabaha ay ka kooban tahayna waa gelatin warshadeed.
Gelatin-warshadeed oo loogu talagalay xabagta waxaa lagu doortaa noocyo kala duwan oo xabag ah maxaa yeelay Gelatin wuxuu leeyahay xoog badan, jilicsanaan iyo sifooyin jilicsan.